Lammaane uu soo daahay dalabkoodii Pizza-ha oo xaajeystay, haddana tallaabo yaab leh ayaa laga qaadi doonaa! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada News Lammaane uu soo daahay dalabkoodii Pizza-ha oo xaajeystay, haddana tallaabo yaab leh ayaa laga qaadi doonaa!
Wednesday, November 08, 2017 Bulshada , News
Bulsha:- Lammaane isku galmooday isagoo ku sugnaa maqaayadda caanka ah ee biisaha laga iibsado ee Domino Pizza Outlet taasoo ku taalla gobolka State of Michigan ee dalka Mareykanka.
Warbaahinta ayaana haatan sheegeysa in lammaanahaan digniin kama dambeys ah la siiyey isla markaana loo sheegay in laga yaabo inay wajahaan ciqaab xabsi ah.
Daniella Hirst ayaa lagu magacaabaa gabadha, halka seygeeda lagu magacaabo Craig Smith, labadaan shaqsi ayaana galmo ku sameeyeen goobtaan macaamiisha badan ay ka adeegtaan.
Maxkamadda Scarborough Magistrates Court ayaana ku eedeysay lammaanahaan inay ugu yaraan muddo 30 daqiiqo ah ku baashaalayeen goob aan loogu talogalin, sidaas darteed laga yaabo inay xabsi galaan.
Kaamirooyinka darbiyada lagu dejiyo ee CCTV ayaa duubay muuqaalkaas, iyadoo warbaahinta adduunka iyo baraha bulshaduba ay qaateen, waxaana muuqaalkaan si gaar ah uga dacwooday maamulka maqaayadda caanka ah ee Domino Pizza Outlet taasoo la sameeyey sannadkii 1960kii.